थवाङ÷ यसपटकको आधार क्षेत्रहरुको भ्रमण विगतका भन्दा रमाईलो र थप शिक्षाप्रद भयो । विद्रोहीहरुका केही वरिष्ठ नेताहरुसंग यसपटक केही दिन संगसँगै यात्रा गर्नु प¥यो र साँझ विहानको समय कुराकानी पनि भए । एक संवाददाताका लागि यो महत्वपूर्ण अवसर थियो– विद्रोही नेताहरुका स्वभाव अध्ययन गर्ने, उहाँहरुबाट सिक्ने । मैले यसपटकको आधार क्षेत्रको भ्रमणमा वरिष्ठ…
छैठी न्वारान भोज भतेर
भ्याई नभ्याई थियो बा लाई ।।
यसो अनुहार हेर्नुहुन्छ बा ले छोराको
खै के सोच्नुहुन्छ
र मन्द मुस्कुराउनु हुन्छ
काटिकुटी बाबू जस्तै
लजाउनु हुन्छ बा
टाउको निहुराएर ।।
दक्षिण पश्चिम फर्किएको पाखो । पाखाभरि सुन्तलाको बगान । बगानभित्र चिटिक्क परेका परम्परागत ढुङ्गे घरहरु । घरका झ्याल, छाना र आँगन एकले अर्कोलाई अंकमाल गरेका सुन्तलाका बोटहरु । पात र फल छुट्याउनै धौ पर्ने गरी लटरम्म फलेका सुन्तला । सुन्तलाले नै उज्यालिएको पहेंलपुर गाउँ ।
यस्तो दृश्य सल्यान कोटमौला– ५ भाङ्गाचौर र वडा नं. ६ डाँगीगाउँको हो ।
विश्व कीर्तिमान कायम गर्ने गीतकार तथा उपन्यासकार डा. डीआर उपाध्यायका एक उपन्यास र तीन गीति एल्बम सार्वजनिक गरिएको छ । नेपाली गीति साहित्य विधामा एकै पटक सात गीति एल्बम बजारमा ल्याई विश्व कीर्तिमान कायम गर्ने डा. डीआर उपाध्यायका आज राजधानीमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा ‘अधुरो प्रेम’ उपन्यास र तीन गीति एल्बम ‘परिष्कृत’, ‘कृति’…
“प्रदर्शन “ले गरे आफ्नो एकल रचना वाचन
पुस २०, सल्यान
सल्यानको बागचौर नगर साहित्य परिषद सल्यानले आफ्नो वार्षिक उत्सव मनाएको छ । परिषदका अध्यक्ष ईन्द्र भण्डारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बागचौर नगरपालिकाका नगर प्रमुख लोकमान बुढाथोकीको प्रमुख आथित्यतामा सम्पन्न भएको हो ।
वार्षीक उत्सव कार्यक्रम संगै परिषदले नियमित मासिक रुपमा गर्दै आएको नियमित मासिक एकल रचना वाचनको बाह्रौं साहित्य श्रीङ्खलामा तारादेव शर्मा “ प्रदर्शन “…
पुष्पा रिजन डि.सि ।"पुरातात्त्विक संरचनाकाे खाेजी र साहित्यिक सृजना, अग्रज श्रष्टाकाे सम्मान र अनुजकाे जगेर्ना" भन्ने मुल नाराका साथ बागचौर नगर साहित्य परिषद्ले वार्षिकोत्सवको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । २०७४ साल पौष १९गते गठन भएको परिषद्ले प्रथम वार्षिकोत्सव बिहिबार मनाएको हो । वार्षिकोत्सवको अवसरमा “बागचौर नगरपालिका” शिर्षकमा खुल्ला कविता प्रतियोगिता र नियमित मासिक एकल रचनाका श्रष्टाहरु सम्मान…
मासिक एकल रचना वाचनमा भूपिन
पुष्पा रिजन डि.सी.। बागचौर नगर साहित्य परिषद्ले नियमित रूपमा गर्दै आएको मासिक एकल रचना वाचन कार्यक्रममा भुम प्रकाश भण्डारी “ “भूपिन“ले जनकल्यान क्याम्पसको प्राङ्गणमा आफ्ना रचना वाचन गर्नु भएको छ ।
एघारौं साहित्य श्रृङखला जनकल्यान क्याम्पसको प्राङ्गणमा सम्पन्न भएको छ । भूपिनले करिब १ दर्जन भन्दा बढि रचनाहरु सुनाउनु भएको थियो । कार्यक्रममा बागचौर नगरपालिकाका नगर प्रमुख…
त्रिवेणी गाउँपालिका स्तरिय लोकसंस्कृति सम्मेलन सम्पन्न
त्रिवेणी गाउँपालिकाले स्थानीय लोक कला संस्कृती संरक्षण प्रवद्र्धनका लागि त्रिवेणी गाउँपालिका स्तरिय लोकसंस्कृति सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ । धाार्मिक स्थल त्रिवेणी तिर्थशाला धाममा आयोजीत एक दिने लोक संस्कृति सम्मेलन सोरठी,पैस्यारु,लहरे, वनगाडी टप्पा लगायतका लोक संस्कृति सम्मेलनमा ६ वडाका १५ वटा समूहले भाग लिई प्रस्तुत गरेका छन् ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिती सल्यानका प्रमुख केश बहादुर…
ती वर्षमान, यी वर्षमान
०४६ को जनान्दोलनपछि देशमा बहुदलीय व्यवस्था कायम भयो । ०४८ सालमा संसदीय चुनाव भयो । प्रतिनिधि सभाको २ सय ५ सिटमध्ये तत्कालीन नेकपा (एकता केन्द्र) को वैधानिक मोर्चा संयुक्त जनमोर्चाले ९ सिटमा विजय हासिल गरेको थियो । ०४८ को चुनावमा अहिलेका सभामुख कृष्णबहादुर महरा रोल्पाबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुनु भएको थियो
निर्वाचित सांसद भए पनि महरा सर…
स्मृतिमा प्रकाश दाहालः हामी सधैं सम्झीरहनेछौं
- रमेश मल्ल/
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको रौनक निकै अघि बढिसकेको थियो । पार्टीको सम्पुर्ण पंक्ति निर्वाचन अभियानमा होमिएको थियो । पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड सचिवालयको टिम सहित पश्चिम नेपालबाट क्रमशः पुर्वतिरका कार्यक्रममा सरिक हुदैहुनुहुन्थ्यो । पार्टीका सिनियर नेताहरु देशबाहीरका कार्यक्रममा सरिक हुन सम्भव नभएकोले समाजवादी पार्टी अफ बङ्गलादेशको निम्तोमा पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै युवराज…